Bluetooth Earphone ကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်တဲ့ OnePlus
5 Apr 2018 . 11:03 AM
OnePlus ကုမ္ပဏီဟာ OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို မကြာခင်ထုတ်လုပ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းတစ်ခုပဲ ထုတ်လုပ်မှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။
Xiaomi လိုပဲ OnePlus ကလည်း Bullet Series Earphones တွေကို ထုတ်လုပ်နေပြီးတော့ အခုဆိုရင် Bullet V2 Earphone ကို နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုသိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ OnePlus က OnePlus6စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ နောက်ထပ် Bullet Earphone တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်သွားမယ့်ပုံပါပဲ။
တစ်ခုထူးဆန်းတာက OnePlus ရဲ့ အခု Bullet Earphone အသစ်က 3.5mm Audio ကြိုးနဲ့မဟုတ်ပဲ Bluetooth Earphone ဖြစ်နေတာပါ။ နာမည်ကိုတော့ Bullet Wireless လို့ ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက OnePlus ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြား 3.5mm Audio Jack ကို ထည့်သွင်းပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ အခု OnePlus6မှာလည်း 3.5mm Audio Jack ပါဝင်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး Bluetooth Earphone တွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း OnePlus ဖုန်းတွေမှာတော့ 3.5mm Audio Jack ပါဝင်ဖို့က မသေချာတော့ပါဘူး။
OnePlus ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ Bullet V2 Earphones တွေတုန်းကလည်း ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့အပြင် Audio Quality အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေခံထားရတဲ့အတွက် အခု Wireless Earphone ကရော ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်လား?
OnePlus ကုမ်ပဏီဟာ OnePlus6စမတျဖုနျးကို မကွာခငျထုတျလုပျလာတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ OnePlus6စမတျဖုနျးတဈခုပဲ ထုတျလုပျမှာမဟုတျလောကျပါဘူး။
Xiaomi လိုပဲ OnePlus ကလညျး Bullet Series Earphones တှကေို ထုတျလုပျနပွေီးတော့ အခုဆိုရငျ Bullet V2 Earphone ကို နောကျဆုံးထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ အခုသိရတဲ့သတငျးတှအေရတော့ OnePlus က OnePlus6စမတျဖုနျးနဲ့အတူ နောကျထပျ Bullet Earphone တဈခုကို ထုတျလုပျသှားမယျ့ပုံပါပဲ။
တဈခုထူးဆနျးတာက OnePlus ရဲ့ အခု Bullet Earphone အသဈက 3.5mm Audio ကွိုးနဲ့မဟုတျပဲ Bluetooth Earphone ဖွဈနတောပါ။ နာမညျကိုတော့ Bullet Wireless လို့ ပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ထူးဆနျးတာက OnePlus ကုမ်ပဏီဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ ထူးထူးခွားခွား 3.5mm Audio Jack ကို ထညျ့သှငျးပေးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈနပွေီးတော့ အခု OnePlus6မှာလညျး 3.5mm Audio Jack ပါဝငျလာဦးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုး Bluetooth Earphone တှကေို ထုတျလုပျနတေဲ့အတှကျ နောကျပိုငျး OnePlus ဖုနျးတှမှောတော့ 3.5mm Audio Jack ပါဝငျဖို့က မသခြောတော့ပါဘူး။
OnePlus ရဲ့ နောကျဆုံးထုတျထားတဲ့ Bullet V2 Earphones တှတေုနျးကလညျး ဈေးနှုနျးသကျသာတဲ့အပွငျ Audio Quality အလှနျကောငျးမှနျတယျလို့ သုံးသပျမှုတှခေံထားရတဲ့အတှကျ အခု Wireless Earphone ကရော ဘယျလိုလာမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရအောငျလား?